Nnwom 78 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn boaa Israel nanso wɔannye no anni
Ka kyerɛ nkyirimma (2-8)
“Wɔannye Onyankopɔn anni” (22)
“Aduan a efi soro” (24)
“Wɔmaa Israel Kronkronni no dii awerɛhow” (41)
Wofii Egypt kɔɔ Bɔhyɛ Asaase no so (43-55)
‘Wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛe’ (56)
Maskil.* Asaf+ dwom. 78 Me man, monyɛ aso mma me mmara;*Monwɛn mo aso ntie m’anom nsɛm. 2 Ɛbɛ na mede bɛkasa; Tete akasabebu na mɛka.*+ 3 Nea yɛate ne nea yenimA yɛn agyanom aka akyerɛ yɛn no,+ 4 Yɛremfa nsie wɔn asefo;Yɛbɛka akyerɛ nkyirimma.+Yehowa nnwuma a ɛsɛ ayeyi, n’ahoɔden+Ne anwonwade a wayɛ no, yɛbɛka ho asɛm.+ 5 Ɔmaa Yakob nkaesɛm,Na ɔhyɛɛ mmara wɔ Israel;Ɔde ahyɛde maa yɛn agyanomSɛ wɔmma wɔn mma nhu nsɛm yi,+ 6 Sɛnea ɛbɛyɛ a awo ntoatoaso a ɛbɛbaAnaa nkyirimma behu,+ Na wɔn nso atumi aka akyerɛ wɔn mma.+ 7 Ɛno bɛma wɔde wɔn ho ato Onyankopɔn so, Na wɔn werɛ amfi Onyankopɔn nnwuma,+Na mmom wɔadi ne mmara nsɛm so.+ 8 Ɛno remma wɔnyɛ sɛ wɔn agyanom,Awo ntoatoaso asoɔdenfo ne atuatewfo no,+Awo ntoatoaso a wɔansiesie wɔn koma+Na wɔanyi wɔn yam anni Onyankopɔn nokware no. 9 Ná Efraimfo wɔ agyan,Nanso woguanee ɔko da. 10 Wɔanni Onyankopɔn apam so,+Na ne mmara nso, wɔamfa anyɛ adwuma.+ 11 Wɔn werɛ nso fii nea ɔyɛe,+N’anwonwadwuma a ɔma wohui no.+ 12 Ɔyɛɛ anwonwade wɔ wɔn agyanom anim+Wɔ Egypt asaase so, Soan mantam mu.+ 13 Ɔpaee po mu ma wɔfaa mu;Ɔmaa nsu no boaa ano te sɛ ɔfasu.+ 14 Ná ɔde omununkum di wɔn anim awiaNa anadwo mũ nyinaa nso, na ɔde ogya a ɛhyerɛn di wɔn anim.+ 15 Ɔmaa abotan mu paee wɔ sare so,Na ɔma wonyaa nsu nom mee te sɛ nea efi ɔtare a emu dɔ mu.+ 16 Ɔmaa nsuten fii ɔbotan mu bae,Na ɔmaa nsu senee sɛ asubɔnten.+ 17 Nanso wɔkɔɔ so yɛɛ no bɔne,Na wɔtew atua tiaa Ɔsorosoroni no wɔ sare no so;+ 18 Wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛe wɔn komam;+Wɔteetee no sɛ ɔmma wɔn aduan a wɔn kɔn dɔ.* 19 Wɔkasa tiaa Onyankopɔn sɛ:“Enti Onyankopɔn betumi ato yɛn pon wɔ sare yi so?”+ 20 Hwɛ! Ɔbɔɔ ɔbotan mu,Na nsu pii fii mu bae ma ebu faa so.+ Nanso wobisae sɛ: “Obetumi ama yɛn paanoo ni?Obetumi ama ne nkurɔfo anya nam awe anaa?”+ 21 Bere a Yehowa tee no, ne bo fuwii;+Ɔmaa ogya+ tɔɔ Yakob mu,Na n’abufuw no mu yɛɛ den paa wɔ Israel so,+ 22 Efisɛ wɔannye Onyankopɔn anni;+Wɔannye anni sɛ obetumi agye wɔn nkwa. 23 Enti ɔkasa kyerɛɛ ɔsoro mununkum,Na obuee ɔsoro mfɛnsere. 24 Ɔtɔɔ mana fii soro ma wodii;Aduan a efi soro na ɔde maa wɔn.+ 25 Nnipa dii atumfo* aduan;*+Ɔmaa wɔn aduan a ɛbɛso wɔn.+ 26 Ɔmaa apuei mframa bɔe wɔ wim,Na ɔde ne tumi bɔɔ anaafo mframa.+ 27 Ɔmaa nam tɔ guu wɔn so te sɛ mfuturu,Na nnomaa tɔe sɛ mpoano anwea. 28 Ɔtɔ guu n’asoɛe hɔWɔ ne ntamadan no ho baabiara. 29 Wodidii na wɔfom aduan.Ɔmaa wɔn nea wɔpɛ.+ 30 Nanso bere a wonnya nnii wɔn akɔnnɔde no nwiei,Na wɔn aduan no da so wɔ wɔn anom no, 31 Onyankopɔn bo fuw wɔn denneennen.+ Okunkum wɔn mu ahoɔdenfo no;+Ɔmaa Israel mmerante totɔɔ fam. 32 Eyi nyinaa akyi, wɔannyae bɔne no yɛ,+Na wɔannya n’anwonwadwuma no mu gyidi.+ 33 Enti otwaa wɔn nkwa nna so ma ɛyɛɛ tiaa te sɛ hwenem mframa,+Na ɔde akomatusɛm twaa wɔn nna so. 34 Nanso bere biara a obekunkum wɔn mu bi no, wɔhwehwɛ n’akyi kwan,+Na wɔsan wɔn akyi kɔhwehwɛ Onyankopɔn, 35 Efisɛ wɔkaee sɛ Onyankopɔn ne wɔn Botan,+Na Ɔsorosoroni Nyankopɔn ne wɔn Gyefo.*+ 36 Nanso wɔde wɔn ano dɛfɛdɛfɛɛ no;Wɔde wɔn tɛkrɛma twaa no nkontompo. 37 Ná wɔn koma nni mu wɔ ne ho;+Wɔanni n’apam no nokware.+ 38 Ne nyinaa akyi no, ohuu wɔn mmɔbɔ;+Ɔde wɔn bɔne kyɛɛ wɔn,* na wansɛe wɔn.+ Mpɛn pii na ɔkaa n’abufuw hyɛe,+Na wanna n’abufuw nyinaa adi. 39 Efisɛ ɔkaee sɛ wɔyɛ ɔhonam;+Wɔte sɛ mframa a ɛbɔ kɔ a, ɛnsan mma bio.* 40 Mpɛn pii na wɔtew atua tiaa no wɔ sare no so,+Na wɔmaa ne werɛ howee wɔ asaase pradadaa no so.+ 41 Wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛe mpɛn pii,+Na wɔmaa Israel Kronkronni no dii awerɛhow.* 42 Ɛda a ogyee wɔn fii atamfo nsam no,+Wɔankae ne tumi;* 43 Saa bere no na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne wɔ Egypt+Ne anwonwade wɔ Soan asaase so; 44 Ɔmaa Nil nsuka nyinaa dan mogya,+Na wɔantumi annom wɔn nsubɔnten no mu nsu. 45 Ɔsomaa ahurii* bebree sɛ wɔnkɔwe wɔn,+Ne mpɔtorɔ sɛ wɔnkɔsɛe wɔn.+ 46 Ɔde wɔn nnɔbae maa ntutummɛ a wodidi fuu,Na ɔde wɔn nsa ano adwuma maa ntutummɛ a wotu yuu.+ 47 Ɔde asukɔtweaa sɛee wɔn bobe,+Na wɔn sikamɔɔ nnua nso, ɔde asukɔtweaa sɛee no. 48 Ɔde wɔn mmoa hyɛɛ asukɔtweaa nsa,+Na ɔde wɔn nyɛmmoa nso maa anyinam.* 49 Ne bo fuw wɔn denneennen,Na ohwiee n’anibere, abufuw, ne ahohia guu wɔn so;Ɔsomaa abɔfo dɔm sɛ wɔmfa ɔhaw mmra wɔn so. 50 Ohwiee n’abufuw guu wɔn so. Wamfa owu ankame wɔn;*Na ɔmaa nsanyare a edi awu baa wɔn* so. 51 Ewiee ase no, ɔbobɔɔ Egypt mmakan nyinaa kunkum wɔn,+Wɔn ahoɔden mfiase no, okunkum wɔn wɔ Ham ntamadan mu. 52 Ɛno akyi no, odii ne nkurɔfo a wɔte sɛ nguankuw no anim,+Na ɔkaa wɔn sɛ mmoakuw wɔ sare no so. 53 Odii wɔn anim dwoodwoo,Na wɔn koma antu;+Wɔn atamfo de, ɛpo no kataa wɔn so.+ 54 Ɔde wɔn baa n’asaase kronkron no so,+Mmepɔw nsaase yi a ɔde ne nsa nifa gyei no.+ 55 Ɔpam amanaman no fii wɔn anim;+Ɔde susuhama kyekyɛɛ agyapade maa wɔn,+Na ɔmaa Israel mmusuakuw tenatenaa wɔn afi mu.+ 56 Nanso wɔsɔɔ Ɔsorosoroni Nyankopɔn no hwɛe, na wɔtew no so atua,+Na ne nkaesɛm nso, wɔanni so.+ 57 Afei nso, wɔtwee wɔn ho fii ne ho, na wotwaa no nkontompo te sɛ wɔn agyanom;+ Wɔbɛyɛɛ sɛ agyan a emu agow a wontumi mfa nyɛ hwee.+ 58 Wɔde wɔn sorɔnsorɔmmea* no hyɛɛ no abufuw,+Na wɔde wɔn ahoni a wɔasen no huruu ne bo.+ 59 Onyankopɔn tee, na ne bo fuwii kɛse.+Enti ɔpoo Israel koraa. 60 Ewiee ase no, otu fii Silo ntamadan no mu,+Ɔsom ntamadan a na ɔte mu wɔ nnipa mma mu no.+ 61 N’ahoɔden sɛnkyerɛnne no, ɔma ekodii baabi;N’anuonyam no, ɔde hyɛɛ atamfo nsa.+ 62 Ɔmaa ne man wuwui wɔ sekan ano,+Na ne bo fuw n’agyapade denneennen. 63 Ogya hyew ne mmerante;Ne mmaabun nso, wɔanto ayeforo nnwom amma wɔn.* 64 N’asɔfo no wuwui sekan ano,+Nanso wɔn akunafo ansu wɔn.+ 65 Ɛnna Yehowa sɔree sɛnea obi nyan fi nna mu;+Ɔyɛɛ sɛ ɔhoɔdenfo+ a nsã* atetew n’ani so. 66 Na ɔmaa n’atamfo dan wɔn ho guanee;+Ɔmaa wɔn anim guu ase afebɔɔ. 67 Ɔpoo Yosef ntamadan;Wampaw Efraim abusuakuw. 68 Yuda abusuakuw na ɔpaw wɔn,+Sion Bepɔw a ɔdɔ no no.+ 69 Ne tenabea kronkron no, ɔde tim hɔ te sɛ ɔsoro;*+Ɔyɛɛ no te sɛ asaase a ɔde atim hɔ afebɔɔ no.+ 70 Ɔpaw n’akoa Dawid;+Ɔfaa no fii nguammuw mu.+ 71 Nguan a wɔma nufu no, ɔma ogyaee wɔn hwɛ,Na ɔma ɔbɛhwɛɛ ne man Yakob+Ne n’agyapade Israel so.+ 72 Oyii ne koma mu fitaa hwɛɛ wɔn,*+Na ɔde nyansa dii wɔn anim.+
^ Anaa “aborɔme na mɛto.”
^ Anaa “aduan a wɔn kra pɛ.”
^ Anaa “Weredifo.”
^ Nt., “ɔkataa wɔn bɔne so.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Na sɛ wɔn honhom no kɔ a, ɛnsan mma bio.”
^ Anaa “dii wɔn ho yaw.”
^ Nt., “ne nsa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔyare.”
^ Nt., “wɔn nkwa.”
^ Nt., “Wɔanyi ne mmaabun nso ayɛ.”
^ Nt., “Osii ne tenabea kronkron te sɛ ade a ɛwɔ sorosoro.”
^ Anaa “Ɔde koma a edi mu hwɛɛ wɔn.”